Judo – Lalao Olympika 2016 (JO) : “1er tour” dia vita Ratsiarson Asaramanitra, lasan’i Paula Pareto ny volamena | NewsMada
Judo – Lalao Olympika 2016 (JO) : “1er tour” dia vita Ratsiarson Asaramanitra, lasan’i Paula Pareto ny volamena
Ratsy fanombohana i Madagasikara. Vao niaka-tsehatra teo amin’ny taranja judo, sokajy -48 kg vehivavy, amin’ny «Lalao Olympika 2016», Ratiarson Asaramanitra, avy hatrany dia raraka. Vizana teo amin’ny dingana voalohany ity solontenantsika ity.
Tsy nampoizina. Nihintsana tany amin’ny dingana voalohany amin’ny fifanintsanana teo amin’ny taranja judo, amin’ny “Lalao Olympika 2016» (JO) mizotra amin’izao fotoana izao, any Rio, Brezila, Ratiarson Asaramanitra.
Niaka-tsehatra ny asabotsy 6 aogositra teo, teo amin’ny sokajy vehivavy -48 kg, ity solontenantsika tokana teo amin’ny taranja judo ity. Ilay Cubaine, Mestre Alvarez, no nikatroka tamin’i Asaramanitra teo amin’ny dingana voalohany. Tapitra teo amin’iny dingana voalohan’ny fifanintsanana iny koa anefa ny lalan’i Asaramanitra. Resin’i Mestre Alvarez tamin’ny alalan’ny fahadisoana, “shidos” telo noho iray, ity solontenantsika ity. Raha ny fanazavana, sendra ny rezatra tany am-boalohany i Asaramanitra satria anisan’ireo mpikatroka judo sangany maneran-tany iny nifanandrina taminy iny. Saingy, nianjera tamin’ny manasa-dalana i Mestre Alvarez rehefa avy nandrodana ilay Espaniôla, Figueroa, laharana fahadimy maneran-tany, sy ilay tompondaka olympika farany, ilay Brezilianina, Menezez.
Araka izany, votsotra teny am-pelatanan’ity farany ny anaram-boninahitra olympika azony efa-taona lasa. Norombahin’ilay teratany Arzantina, Paula Pareto, ny medaly volamena olympika teo amin’ny sokajy -48 kg vehivavy tamin’ity andiany 2016 any Rio, Brezila, ity.
Ankoatra izay, raha ny vaovao voaangona, nanapa-kevitra ny tsy hanao judo intsony kosa Ratiarson Asaramanitra. Nambarany fa hifantoka misimisy kokoa amin’ny fiainan-tokantranony amin’izay izy manomboka izao.
Etsy andaniny, nanolotra fisaorana feno ho an’ireo izay nanohana azy sy nanampy azy ka naha voasokajy azy tamin’ity JO 2016 any Rio ity ny tenany. Fa tsy nohadinoiny ihany koa ny kliobany, Dojo Huang, ao La Réunion, sy ny federasiona malagasin’ny judo (FMJ).